Yahoo ayaa joojineysa u oggolaanshaha isku xirnaanta iyo dirista qalabka macruufka ee gaboobay | Wararka IPhone
Yahoo ayaa joojin doonta u oggolaanshaha isku xirnaanta xiriirada iyo boostada qalabka macruufka ee duugoobay
Waqti ka hor markii Yahoo uu ahaa kan ugu sarreeya shirkadaha tiknoolajiyada, waxay ahayd degel tixraac ah oo isticmaaleyaal badan ayaa koonto emayl ku leh cinwaankooda. Laakiin in muddo ah hadda, waxay umuuqataa taas Yahoo ma awoodin inay la qabsato deegaanka ay ku nooshahay waxaana dib loogu celiyay asalka, noqoshada macbud xigmad leh jawaabaha Yahoo, sababta oo ah Google iyo Microsoft adeegyadooda emayl ee aadka u wanaagsan.
Yahoo ayaa shalay ku dhawaaqday in Juun 15, waxay joojin doontaa taageerida aaladaha duugga ah ee ku saleysan iOS iyo OS X, si aysan isticmaaleyaashu mar dambe awoodi doonin inay si otomaatig ah u waafajiyaan emayllada iyo xiriirada aan ku keydinnay koontada emailka shirkadeena. Isbeddelkan wuxuu saameynayaa labada codsi ee Yahoo Mail ee loogu talagalay macruufka iyo codsiga Mail ee ay Apple na siiso dal ahaan. Sidoo kale, haddii aan haysanno qaab duug ah OS X, ma awoodi doonno inaan sii wadno iskuxiridda xiriirkeenna ajandaha Mac-dayada.
Ka soo horjeedda wixii ku dhacay barnaamijka Google YouTube, ee joojiyay taageerida aaladaha leh nooc ka mid ah iOS 6 ama ka hooseeya oo lagu rakibay qalabkooda, Yahoo waxay joojin doontaa taageerida iPhone, iPad iyo iPod Touch oo ay maamusho macruufka 4 iyo qoraalkii hore. Sababta ugu weyn ee go'aankan Yahoo ayaa ah in diiradda la saaro adeeg ammaan ah oo shaqeynaya. Haddii aad haysato qalab leh iOS 4 ama wax ka hooseeya, weli waad awoodi doontaa inaad ka hesho adeegga boostada adoo adeegsanaya mail.yahoo.com.
Sida qalabka Mac, Yahoo ayaa joojin doonta taageerada ay siiso isku-darka labada e-mayl iyo xiriirada noocyadooda kahor OS X Lion 10.7 si loo sii wado bixinta adeeg ammaan ah oo dhakhso leh, astaamo aysan ku sii wadi karin inay ku bixiso noocyo duug ah. Isticmaalayaasha noocyadii hore ayaa lagu qasbi doonaa inay cusbooneysiiyaan noocooda OS X markasta oo ay suurta gal tahay haddii ay doonayaan inay sii wadaan helitaanka taageerada, ama ay si toos ah ugala soo galaan bogga Yahoo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Yahoo ayaa joojin doonta u oggolaanshaha isku xirnaanta xiriirada iyo boostada qalabka macruufka ee duugoobay
Samsung ayaa olole cusub oo xayeysiis xayeysiis ah oo ka dhan ah iPhone
2Do, maamule hawleed weyn sida codsiga usbuuca